खोजीको साथ, दोस्रो स्थान केवल पहिलो हराएको हो | Martech Zone
खोजीको साथ, दोस्रो स्थान केवल पहिलो हराएको हो
शनिबार, नोभेम्बर ०,, २०२० शनिबार, नोभेम्बर ०,, २०२० Douglas Karr
केहि मान्छेहरु साँचो उत्तेजित हुन्छन् जब उनीहरुका पृष्ठहरु खोज ईन्जिन नतीजाहरुमा देखा पर्न सुरू हुन्छ। धेरै कम्पनीहरूले थाहा पाउँदैनन् कि कति ठूलो खेल हो र कति पैसा जोखिममा छ जब यो कुञ्जीपाटी श्रेणीकरण र खोज इञ्जिन प्लेसमेन्टको मूल्यको कुरा आउँछ।
त्यसोभए ... यहाँ एक उदाहरण छ जहाँ म श्रेणीको मूल्य परिमाण गर्न सक्छु। कल्पना गर्नुहोस् हामी एक सान होसे रियल एस्टेट एजेन्ट हो र हामीले एउटा उत्कृष्ट ब्लग र खोज इञ्जिन मार्केटिंग अभियान पाएका छौं जुन हामीलाई पदका लागि माथि सार्दैछ। सैन जोस होम बिक्रीको लागि.
पछिल्लो महिना, त्यहाँ १135,000,००० खोजीहरू थिए सैन जोस होम बिक्रीको लागि.
बिक्रीको लागि एक घरको औसत घर मूल्य स्यान जोसेमा $ 544,000$XNUMX,००० हो।
घर जग्गा कमिसन%% र%% बीचको छ, त्यसैले let's% औसत कमिशन दर कल्पना गरौं।
अब कल्पना गर्नुहोस् कि केवल ०.१% खोजीकर्ताहरूले वास्तविक बिक्रीमा परिणाम ल्याए।
SEO शोधकर्ताले केहि प्रदान गरेको छ श्रेणी र प्रतिक्रिया मा तथ्या्कत्यसो भए गणित गरौं र पृष्ठ 8 को स्थितिबाट खोज ईन्जिन नतीजा पृष्ठमा # १ स्थितिको लागि आयोगहरूको हिसाब गरौं:
हाल, ट्रुलिया # 1 स्थिति र होल्ड गर्दछ Zillow #2स्थिति होल्ड गर्दछ - वास्तविक रियल ईस्टेट एजेन्टहरू हैन। यद्यपि, तथ्य यो छ कि केवल # १ स्थान पकडेर ट्रुलियाले ती खोजहरूको लागि of 1% क्लिकहरू समेट्छन् - $१ अर्ब डलर रियल ईस्टेटमा एकल शहरको लागि खोजी। Zillow मात्र billion १० अरब को अन्तर्गत छ। तपाईं अखबारमा पुग्नुभएपछि, यो बुध समाचार, तपाईं केवल billion बिलियन भन्दा कम हुनुहुन्छ।
म उत्सुक छु किन यस क्षेत्रका एजेन्टहरू र दलालहरूले यी डाइरेक्टरीहरू जित्न दिइरहेका छन्… तिनीहरू सकेजति उनीहरूमा भर पर्नुको सट्टा प्रतिस्पर्धा गर्नुहोस्। क्षेत्रीय दलालीहरु मध्ये एक लाई के लायक लाग्दैन सर्च इन्जिन मार्केटिंगमा दुई लाख अमेरिकी डलर खर्च गर्न? हो ... हो यो हुन्छ।
ट्रुलिया यो एकल कुञ्जी शब्दको साथ times पटक ट्राफिक जित्दै छ! Times पटक! जब तपाइँ खोजी ईन्जिन कम्पनीहरू र सल्लाहकारहरूको मूल्याating्कन गर्नुहुन्छ, यस तथ्यलाई नपठाउनुहोस्। दिमागमा राख्नुहोस् कि यी प्रतिस्पर्धी सर्तहरू र उच्च खण्ड खोजीहरूमा प्रतिस्पर्धा गर्न धेरै महँगो हुन थाल्छ। हामी अहिले एक प्रमुख ग्राहकको साथ काम गर्दैछौं र उनीहरूलाई खोज ईन्जिन परिणाम पृष्ठमा पुश गर्दैछौं। हामीले अभियानको लागि पूर्ण रूपमा भुक्तान गर्न र हामीलाई थप काम प्रदान गर्नका लागि उनीहरूको लागि १ स्पटहरू प्राप्त गर्न आवश्यक छ। दांव ठूलो छ र हामी त्यहाँ पुग्नेछौं - तर यसले धेरै मेहनत लिइरहेको छ।
धेरै कम्पनीहरू खुसी हुन्छन् जब उनीहरू पहिलो पृष्ठमा हुन्छन्… ठूलो गल्ती। खोज ईन्जिन नतीजाहरूमा निर्दिष्ट कुञ्जी शव्दहरूमा देखाउन यो पर्याप्त छैन - ती खोजहरू जित्नु व्यवसायलाई जित्नको लागि महत्वपूर्ण छ र ती खोजहरूको पछाडिको डलर। तपाईंको कुञ्जीशब्दहरू, नजिकको अनुपात, र राजस्वको लागि लगानीमा फिर्ताको गणना गर्न सुरू गर्नुहोस्। तपाइँ फेला पार्न सक्नुहुन्छ कि यो खोज मार्केटिंग रणनीतिहरूको लागि सयौं हजारौं डलर खर्च गर्न लायक छ। यदि तपाईंले यसलाई महसुस गर्नुभएन भने - सायद तपाईंको प्रतिस्पर्धा हुनेछ।
मेरो बुबाले मलाई भन्नुहुन्थ्यो… "दोस्रो स्थान केवल पहिलो हारेको छ"।
टैग: ब्रायन गोफम्यानedgerankकसरी klout मापन छपासवर्ड बलसामाजिकसामाजिक ब्रो
SEO: १० लिंक प्रलोभनहरू जोगिनका लागि
ईमेलको साथ डिकको खेल सामग्री ड्राइविंग सोशल मीडिया
नोभेम्बर २०, २००। 8::2009 अपराह्न
ठीकै भने - कुनै वेबसाइट वा खोज इञ्जिन मार्केटिंग कम्पनीको अन्तिम लक्ष्य # १ प्राप्त गर्न को लागी हो। Thats जहाँ ठूलो पैसा छ…
नोभेम्बर २०, २००। 9::2009 अपराह्न
# 1 र #2बीचको भिन्नता मैले सोचेको भन्दा धेरै ठूलो छ।
मलाई आश्चर्य छ कि यदि यो सुसंगत रहन्छ वा ग्राहकले मार्केट अलि परिपक्व भएपछि केही बेर तल ड्रिल गर्न थाल्छ भने ...